बिर्तामोडमा एकको मृत्यु, नगर प्रमुखको घरमा तोडफोड र आगजनी: के थियो घटना निहुँ ? – Etajakhabar
काठमाडौँ- झापाको बिर्तामोडमा प्रहरीको गोली लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ । अर्जुनधारा–५ का ३२ वर्षीय नरेश थापाको प्रहरीले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भएको झापा प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।
अनिश्चितकालीनकफ्र्यु आदेश परिवार र गाउँलेले निरन्तर आन्दोलन चर्काएपछि स्थानीय प्रशासनले शुक्रबार अपराह्नदेखि बिर्तामोडको दुई किलोमिटर क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कफ्र्यु आदेश जारी गरेको छ । प्रदर्शनकारीले कफ्र्यु उल्लंघन गर्दै यान्त्रिक कार्यालयमा आगजनी गरेपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो ।
प्रमुखको घरमा तोडफोड र आगजनी प्रदर्शनकारीले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा आगजनीको प्रयास र विर्तामोड नगरपालिका प्रमुख धु्रवकुमार सिवाकोटीको घरमा तोडफोड गरेका छन् । घरको कम्पाउन्डभित्र राखिएको विर्तामोड नगरपालिकाको मे१ज १२१ र नगर प्रमुख सिवाकोटीको निजी बा१०च ३०६१ नम्बरको गाडी तोडफोड गरिएको छ । उनको घरमा पार्किङ गरेर राखिएको मे७प ३००० मोटरसाइकलमा प्रदर्शनकारीले आगजनी गरेका छन् ।
के थियो घटना निहुँ ? विजयादशमीका दिन बिहान १४ असोजमा आफन्तको घरमा जुत्ता लिन गएका ११ वर्षीय सिवाकोटीको शव भोलिपल्ट बिहान विर्तामोड नगरपालिका–१ को बैसाबाडीमा फेला परेको थियो । शरीरका विभिन्न भागमा चोट देखिनुका साथै अन्डकोष काटिएको अवस्थामा शव फेला परेपछि आफन्त र गाउँलेले घटनालाई हत्या भन्दै गम्भीर छानबिनको माग गर्दै आएका थिए ।
प्रहरीले घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान नगरी आरोपीलाई अदालतमा पेस गर्ने तयारी गरेको भन्दै आफन्त र गाउँलेले शुक्रबार विर्तामोड बन्दको आह्वान गरेका थिए । बन्द सफल पार्ने अभियानस्वरूप निकालिएको विरोध जुलुसमा प्रहरीले अवरोध गरेपछि तनावको स्थिति सिर्जना भएको हो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
गृहद्वारा छानबिन समिति गठन बिर्तामोड घटनाको अनुसन्धानका लागि गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ । सहसचिव वीरेन्द्रकुमार यादवको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको हो ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक ११, २०७४ समय: ७:२६:५४